မိမိမှာ HIV ပိုးရှိနေမှန်းသိသိနဲ့ ယောင်္ကျားချင်းစအိုကို လိင်ဆက်ဆံအမြတ်ထုတ်သူ သတင်းအပြည့်အစုံ - ACHITLWINPYIN
မိမိမှာ HIV ပိုးရှိနေမှန်းသိသိနဲ့ ယောင်္ကျားချင်းစအိုကို လိင်ဆက်ဆံအမြတ်ထုတ်သူ သတင်းအပြည့်အစုံ
March 13, 2018 Kwee Thiha ပြည်တွင်းသတင်း 0
လိင်အမြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ စားပွဲထိုးတဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ (ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မယ့်လိမ့်လုံစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသားကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်း စားပွဲထိုးအမျိုးသားငယ်ကို “အလိုမတူဘဲ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အဓမ္မပြုကျင့်မှု” နဲ့ မတ်လ ၉ရက်နေ့က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားတဲ့ တရားလို အမျိုးသားငယ်နဲ့ သူ့ မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းကို ဧရာဝတီက မေးမြန်းမှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နေစားစရိတ်ငြိမ်း ၈ သောင်းတဲ့နယ်ကတက်လာတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အတွက် ဒီလစာဟာ မက်လောက်စရာငွေကြေးပါ။
ရန်ကုန်ကိုလာဖို့ ပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်က လာဖို့အချိန်တုန်းက သူ့မှာ အိပ်မက်တွေ တစ်လှေကြီး ရှိနေခဲ့မှာပဲ။
အမေတို့အတွက် မီတာလေးတပ်ပေးမယ်ညီမလေးကိုလဲ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေချင်တယ်
ရန်ကုန်မြို့မှာ နေရမယ့် ဘဝဆိုတာကလဲ စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိ…
တစ်ပတ်ဆိုတဲ့ အချိန်လေးအတွင်းမှာ ဒီလူငယ်လေးရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်သွားစေခဲ့မယ်လို့ ဘယ်သူက ကြိုသိခဲ့ပါ့မလဲ။ အတွေးထဲမှာ ရွှေရောင်တလက်လက်တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ဟာ လေနဲ့အတူလွင့်ပါသွားတဲ့ တိမ်ငွေ့တွေပဲ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။
ဧရာဝတီ မီဒီယာက အင်တာဗျူးတဲ့ ဗီဒီယိုထဲက လူငယ်လေးရဲ့
ဆေးထုပ်ကလေး ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေကို ကြည့်ရင်း
နင့်ကို ငါ သနားလိုက်တာ ကောင်ကလေးရယ်
ဘယ်အရွယ်လဲဆိုတာ အတိအကျမသိပေမယ့် မြင်ရကြားရသလောက် ကိုယ့်မောင်လေးလောက်အရွယ်လေး။ အညွန့်တလူလူတက်ရမယ့်အရွယ်လေးမှာ အညွန့်ကျိုးခဲ့ရှာပြီ။ ရင်ထဲမကောင်းလွန်းလုို့ ကိုယ်ပါ သူနဲ့အတူလိုက်ငိုရတယ်။
အဲ့ကောင်လေးကို အဓမ္မကျင့်တဲ့ HIV ပိုးရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကို ဝင်ကြည့်လိုက်မိမှ ပိုပြီး ကိုယ့်ကို အံသြသင့်စွာ ထိတ်လန့်သွားစေခဲ့တာ။ အဲဒီလူက International HIV/AIDS Alliance ရဲ့ Programme Officer လုပ်ခဲ့တဲ့သူတဲ့။
Safe Sex အတွက် ကွန်ဒုံးသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိ သူသိတယ်။
သမရိုးကျမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ ပိုကူးနိုင်မှန်းသူသိတယ်။
ဒီကောင်လေးရဲ့ ဘဝ အညွန့်ကျိုးသွားမှာ သူသိတယ်။
အသိဥာဏ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာ ကျားမဖြစ်ခြင်း၊ ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု၊ အသက်အရွယ်၊ ငွေကြေးဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဂုဏ်ပကာသနတွေနဲ့ ဘာဆိုဘာမှကို မဆိုင်တာ။
ဒါတွေကို ဒီလူသိသိရက်နဲ့ သမရိုးကျမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကွန်ဒုံးမပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံပြီး ကောင်လေးကို ဖျက်စီးခဲ့တာ။ Consultant လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့၊ ပညာတတ်တဲ့၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလုပ်ရပ်လုပ်တာ သိပ်ကို ရုပ်ဆိုးလွန်းတယ်။
“အားကြီးသူနဲ့ အားနည်းသူနဲ့ တုိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့ တရားဥပဒေကို အားကိုးပါတယ်ဆိုတဲ့” ဒီကိစ္စကိုလိုက်ကူညီပေးတဲ့ အန်တီကြီးရဲ့ စကားတွေလိုပဲ တရားဥပဒေက အားနည်းသူဘက်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပေးပါ့မလား???
နေ့စဉ်လိုလို ဖတ်နေရတဲ့ အဓမ္မပြုခံရတဲ့ကိစ္စတွေ၊ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေကရော တရားခံကို ဖမ်းပြီး ထောင်ချလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးနေဦးမှာလား???
ဒီလိုမျိုး အနိုင့်အထက်ပြုခံရပြီး ပျက်သွားတဲ့ ဘဝတွေ ဘယ်လောက်တောင်များနေပြီလဲ???
သူတုို့တွေကိုရော ဘယ်သူတွေက အကာအကွယ်ပေးမှာလဲ???
ဒုက္ခတွေ ကြုံတွေခံစားလိုက်ရတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဘဝတွေနဲ့ အနာဂတ်တွေကရော ?????
ကိုယ်တွေက အတွေးနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတုန်းမှာပဲ အနာဂတ်တွေ ပျက်စီးနေကြတာ
Credit Eaint Kyawt Hmu